မန္တလေးမြို့ ရတနာပုံဈေး skywalk တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
မန္တလေး ၁၇ ဇန်နဝါရီ
မန္တလေးမြို့ရတနာပုံဈေး၇၈ လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းထောင့်ရှိ skywalk (ရတနာပုံဈေး) ရတနာမော အပေါ်ထပ် လေးလွှာတွင် ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီဝန်းကျင်မှ စတင်၍ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ level.4အဆင့်ကို ကျော်လွန်ပြီး တိုင်းအဆင့် သတ်မှတ်၍ ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားရာသို့ ရောက်ရှိနေသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ခေတ္တ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇာနည်အောင်က "တစ်တိုင်းလုံးမှာ ရှိတဲ့ မီးသတ်သမားတွေက စွန့်စွန့်စားစား အောက်စီဂျင်စက်တွေ အကူအညီနဲ့ အထဲဝင်ရောက်ပြီး ငြှိမ်းသတ်နေပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ မီးကို ထိန်းထားနိုင်ပါပြီ။ အထပ်မြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် မီးငြှိမ်းသတ်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ လိုအပ်ရင် စစ်ကိုင်းတိုင်းကလည်း ကူညီဖို့အတွက် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် မန္တလေး မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် ဦးကျော်ဆန်းမြင့်ကလည်း "ရတနာပုံဈေး မီးလောင်မှုကို တစ်တိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ မီသတ်ဌာနတွေနဲ့အတူ စည်ပင် ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်း ပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းပြီး ငြှိမ်းသတ်နေပါတယ်။ မီးလောင်ပြီး ၂ နာရီခွဲအကြာမှာ မီးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပေမယ့် စိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဝါယာရှော့ ဖြစ်ပြီး လောင်တယ်လို့ ယူဆနေကြတယ်။ အထပ်မြင့်မှာ လောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဒီလို ငြှိမ်းသတ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေ လုံလုံလောက်လောက် မရှိသေးဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် ငြှိမ်းသတ်နိုင်မှာပါ" ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ရာသို့ လာရောက်၍ မီးငြှိမ်းသတ်နေသည့် သံလျက်မော်တောင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ဒုတပ်ခွဲမှူး ဦးသန်းဗိုလ်ကလည်း "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်က မီးမငြိမ်းမခြင်း ဝိုင်းဝန်း ငြှိမ်းသတ်ရမှာပါ။ အတွင်းထဲမှာ ကုန်ခြောက်ပစ္စည်းတွေ ရှိနေတဲ့ အတွက် ငြှိမ်းသတ်ရတာ ကြာနေတယ်" ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ရတနာပုံဈေးမှာ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်ကလည်း မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁၅၀ဝ ကျော်နှင့် ငွေကျပ်သန်းပေါင်း နှစ်ထောင့်ခြောက်ရာကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန်တလေးမွို့ ရတနာပုံဈေး skywalk တှငျ မီးလောငျမှု ဖွဈပှား
မန်တလေး ၁၇ ဇနျနဝါရီ
မန်တလေးမွို့ရတနာပုံဈေး၇၈ လမျးနှငျ့ ၃၄လမျးထောငျ့ရှိ skywalk (ရတနာပုံဈေး) ရတနာမော အပျေါထပျ လေးလှာတှငျ ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီဝနျးကငျြမှ စတငျ၍ မီးလောငျမှု ဖွဈပှားခဲ့ရာ level.4အဆငျ့ကို ကြျောလှနျပွီး တိုငျးအဆငျ့ သတျမှတျ၍ ငွှိမျးသတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ မီးလောငျမှု ဖွဈပှားရာသို့ ရောကျရှိနသေညျ့ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအဖှဲ့ ခတ်ေတ ဝနျကွီးခြုပျ ဦးဇာနညျအောငျက "တဈတိုငျးလုံးမှာ ရှိတဲ့ မီးသတျသမားတှကေ စှနျ့စှနျ့စားစား အောကျစီဂငျြစကျတှေ အကူအညီနဲ့ အထဲဝငျရောကျပွီး ငွှိမျးသတျနပေါတယျ။ လကျရှိ အခွအေနမှောတော့ မီးကို ထိနျးထားနိုငျပါပွီ။ အထပျမွငျ့ဖွဈတဲ့အတှကျ မီးငွှိမျးသတျရတာ ခကျခဲပါတယျ။ လိုအပျရငျ စဈကိုငျးတိုငျးကလညျး ကူညီဖို့အတှကျ အဆငျသငျ့ ပွငျဆငျထားပါတယျ" ဟု ပွောကွားသညျ။
ထို့ပွငျ မန်တလေး မွို့တျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီဝငျ ဦးကြျောဆနျးမွငျ့ကလညျး "ရတနာပုံဈေး မီးလောငျမှုကို တဈတိုငျးလုံးမှာရှိတဲ့ မီသတျဌာနတှနေဲ့အတူ စညျပငျ ဝနျထမျးတှနေဲ့ အဖှဲ့အစညျး ပေါငျးစုံ ပူးပေါငျးပွီး ငွှိမျးသတျနပေါတယျ။ မီးလောငျပွီး ၂ နာရီခှဲအကွာမှာ မီးကို ထိနျးခြုပျနိုငျပမေယျ့ စိတျခရြတဲ့ အခွအေနတေော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ဝါယာရှော့ ဖွဈပွီး လောငျတယျလို့ ယူဆနကွေတယျ။ အထပျမွငျ့မှာ လောငျတာဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ဆီမှာ ဒီလို ငွှိမျးသတျတဲ့ စကျပစ်စညျးကိရိယာတှေ လုံလုံလောကျလောကျ မရှိသေးဘူး။ နောကျပိုငျးမှာ ဝယျယူဖွညျ့တငျးပွီးပွီ ဆိုရငျတော့ ဆုံးရှုံးမှု အနညျးဆုံး ဖွဈအောငျ ငွှိမျးသတျနိုငျမှာပါ" ဟု ပွောသညျ။
အဆိုပါ မီးလောငျရာသို့ လာရောကျ၍ မီးငွှိမျးသတျနသေညျ့ သံလကျြမျောတောငျ မီးသတျတပျဖှဲ့မှ ဒုတပျခှဲမှူး ဦးသနျးဗိုလျကလညျး "ကြှနျတျောတို့ရဲ့ တာဝနျက မီးမငွိမျးမခွငျး ဝိုငျးဝနျး ငွှိမျးသတျရမှာပါ။ အတှငျးထဲမှာ ကုနျခွောကျပစ်စညျးတှေ ရှိနတေဲ့ အတှကျ ငွှိမျးသတျရတာ ကွာနတေယျ" ဟု ပွောသညျ။
အဆိုပါ ရတနာပုံဈေးမှာ ၂၀ဝ၈ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီ ၂၅ ရကျကလညျး မီးလောငျကြှမျးမှု ဖွဈပှားခဲ့ပွီး ဆိုငျခနျးပေါငျး ၁၅၀ဝ ကြျောနှငျ့ ငှကေပျြသနျးပေါငျး နှဈထောငျ့ခွောကျရာကြျော ဆုံးရှုံးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။